Adna Aadan "waan la midoobaynaa Soomaaliya, haddii dowlad wanaagsani ka dhalato" - Halbeeg News
Adna Aadan “waan la midoobaynaa Soomaaliya, haddii dowlad wanaagsani ka dhalato”
WASHINGTON (HALBEEG) – Wakiilka Somaliland u qaabilsan wadahadallada Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegtay in Somaliland dib ula midoobi doonto Soomaaliya inteeda kale, haddii ay dalka ka hirgasho dowlad wanaagsan oo wax lala qabsan karo, waa sida ay hadalka u dhigtaye.
Adna Aadan Ismaaciil oo waraysi gaar ahaa siisay laanta afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA, waxay dhinaca kale sheegtay in Somaliland diyaar u tahay gacmo furanna kusoo dhoweynayso in dib loo sii ambaqaado wadahadalladii kala dhexeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Somaliland mar walba waxay leedahay diyaar baanu nahay, waanu soo dhoweynaynaa, waan ku faraxsannahay, gacan saaxiibtinimo ayaan u fidinaynaa waan soo dhoweynaynaa walaalahayaga Soomaaliyeed” ayey tiri iyadoo sii raacisay “Somaliland waa diyaar, maantadan waa diyaar”
Mar la weydiiyey su’aal ahayd, ma laga yaabaa in aad Soomaaliya dib ula midowdaan? Waxay ku jawaabtay “Haddii dowlad wanaagsani ka dhalato Soomaaliya oo wax lala qabsan karaa dabcan!”
Hadalka Adno Aadan, wuxuu kusoo aadayaa maalmo kaddib markii Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya shaaciyey in dib loo sii ambaqaadi doono wada hadalladii labada dhinac, si xal waara looga gaaro khilaafaadka jira.
Sacad Cali Shire oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Maamulka Somaliland, ayaa shir jaraa’id oo labo toddobaad kahor uu magaalada Hargeysa ku qabtay, wuxuu ka sheegay in wadahadal Somaliland la gasho Dowladda Federaalka uu ku xiran yahay shardi ah in Dowladda Soomaaliya marka hore Somaliland u aqoonsato dal madax bannaan.
Dhinaca kale, Beesha caalamka ayaa wadda dadaal ku aaddan sidii mar kale dib loogu sii ambaqaadi lahaa wadahadalladii u socdey labada dhinac, kaddib muddo shan sano ku dhow oo ay hakad galeen.
​Danjireyaasha ​wadammada ​Denmark iyo ​Netherlands ​ee Soomaaliya​, ayaa bishan horraanteedii magaalada Nairobi kula kulmay Baashe Cawil Cumar oo ah Wakiilka Somaliland ​ee Kenya. Kulankaas kaddib, waxay labada danjire si wadajir ah ugu baaqeen​ in mar kale miiska wada ​xaajoodka laysugu yimaado, dibna loo soo nooleeyo wada xaajoodyadii ​horay u socday.
Somaliland ayaa bishii May 18keedii sannadkii 1991, waxay si iskeed ah ugu dhawaaqday inay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan ilaa iyo xilligaas helin ictiraaf caalami ah.
Aqalka Sare ee Maraykanka oo ansixiyey Brett Kavanaugh